Weerara Namoota Nagaa – Oromoota Walloo irratti Mootummaa PP fi – Adda Bilisummaa Oromoo
Mootummaa Naannoo Amaaraatiin Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisee
Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo.
Dabalataanis, Impaayerri Itiyoophiyaa: Humna Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa, Eegdota Rippaabilikaa, Loltoota Eertiraa fi garee daangaa babaldhifannaa Faannoo Amaaraa 80,000 ol ta’an bobbaasuun kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weeraraa baldhinaan itti taa’ee jira. Loltootni kunneenis manneen jireenyaa uummata nagaa (jiruu fi jireenya) madda galii isaanii, mana, beeyladoota, midhaan, fi midhaan oyruurra jiran kan guban yommuu ta’u; waraanumti kunis daa’immanii fi maatii
Oromoo lafa isaaniirraa dhabamsiisuudhaaf wixineeffame. Kanaafuu, ABOn gochaa weeraraa kana cimsee balaaleffachaa; waamicha armaan gadii ni dhiyeessa: